Cazoo - Nei ndisina kuzviita kare?
Mhinduro iri nyore, Cazoo inopa! nft.cazoo.it yakazvarwa pakutanga kwa2022 pakukumbira kwenharaunda imwe chete, iyo yakawedzera kutora zvikumbiro zvekubatana ...
Ramba uchiverengaNdeapi matsva eNFT akaunganidzwa ari kuuya muna 2022?
Discount pane Binance fizi
Kutengeserana kwega kwega, kushanda kwemari kwega kwega kunoitwa paBinance, iyo Shanduko hombe pasi rese nhasi, ine mutengo, komisheni, mubhadharo. Kana usati watonyorwa ku ...
Ramba uchiverengaDiscount pane Binance fizi
Gwara rakazara rekunzwisisa mashandisiro eBinance
Ngatitsvakei kuti chii chinonzi Binance, kuti inoshandiswa sei uye kuti ungatenga sei uye kutengesa macryptocurrencies neiyi hombe Shanduko.
Ramba uchiverengaGwara rakazara rekunzwisisa mashandisiro eBinance
Otomatiki Vagadziri Vemusika vanokurudzira vashandisi kuti vave vapi vemari mukutsinhana nechikamu chemubhadharo wekutengesa uye tokeni dzemahara. Pakazvarwa Uniswap mu...
Ramba uchiverengaChii chinonzi AMM, Automated Market Maker?
CryptoCompare's ichangoburwa mwedzi mushumo inoratidza Binance akatapa chinenge chikamu chimwe muzvitatu chemari yese yakatengeswa pamapuratifomu ecryptocurrency muna Kurume 2022. Hapana mabhanana. Maererano nemushumo wenguva pfupi yapfuura ...
Ramba uchiverengaBinance Akachengeteka here? Yakakwanisa 30% yenzvimbo vhoriyamu yecryptocurrencies yaKurume 2022
TL: DR Paunenge uchisarudza kutenga kana kutengesa NFT unofanirwa kunge uine mamwe ma metrics mupfungwa kuti uone kukosha kwayo. Ndinoverenga masere, masere metrics ...
Ramba uchiverengaIwo metrics ekufunga nezvekutenga nekutengesa maNFTs
TL: Mari dzehupfumi dzeDRLP imari yekristptocurrencies inogona kuvanza kana kuvharidzira kutengeserana pa blockchain kuchengetedza mazinga epamusoro ekuvanzika uye kusazivikanwa. Yavo yepamusoro cryptographic nzira ndiyo ...
Ramba uchiverengaIwo gumi akanakisa ekuvanzika mari uye maitiro ekuatenga
Maitiro ekutsvaga maNFT anoita 100x?
NFT: ZVINOGONESA Nhungamiro yeKutsvaga Inotevera 100x!
Ndiani asingade kuita x50 kana x100 nekudyara kweNFT? Nekudaro, zvinova zvakatonyanya kuoma kupfuura ne cryptocurrencies, nekuti kune akati wandei akasiyana zvinhu ...
Ramba uchiverengaNFT: ZVINOGONESA Nhungamiro yeKutsvaga Inotevera 100x!
NFT Chirevo: 2021 igore rekukura kukuru
Isu takaverenga yazvino Nonfungible report, yakatsaurirwa kuNFT nyika. Isu tinovimba neNonfungible here? Ndini ani? Yakavambwa muna 2018 kutanga kuteedzera Decentraland chaiyo-nguva kutengeserana, kambani ...
Ramba uchiverengaNFT Chirevo: 2021 igore rekukura kukuru
TL: DR Binance yatanga mutambo mutsva, nhabvu nhabvu. Chero ani anotengesa zvakanyanya anokunda zvakanyanya BUSD. Kuchengeta mafainari eCopa America neEuro Cup, pamwe nemweya wekukwikwidza we ...
Ramba uchiverengaBhora kupa: chinja fiat & share. Pool Prize: 50.000 BUSD neBinance
Binance NFT Musika: Kuunganidzwa naAndy Warhol, Salvador Dalì
Asina-Fungible Zviratidzo (NFTs) zvakakunda pasi. Kunze kwekunge iwe uchigara mubako, panowanikwa wifi zvakanyanya, iwe watonzwa nezve izvi zvitsva ...
Ramba uchiverengaBinance NFT Musika: Kuunganidzwa naAndy Warhol, Salvador Dalì
Metamask Kugadziridza: Chinjana pane iyo Binance Smart Chain zvakananga kubva kuMetamask chikwama
Iyo yazvino yekuvandudza yeMetamask inoita kuti hupenyu huve nyore kune vadikani veBinance Smart Chain: ikozvino zvave kuita kuchinjana tokeni zvakananga kubva kudesktop kana nharembozha. Basa rekuchinjana rinosanganisa iyo data ...
Ramba uchiverengaMetamask Kugadziridza: Chinjana pane iyo Binance Smart Chain zvakananga kubva kuMetamask chikwama
Zvakanaka hongu! India, iyo pakutanga yakaratidza kuvengana kwakanyanya nema cryptocurrencies, ikozvino yatumira komiti inotarisirwa kuendesa gwaro renyunyuto kudare remakurukota munguva pfupi iri kutevera. Mushure…
Ramba uchiverengaIndia inogona kufamba ichironga Bitcoin sekirasi yeasset
Item Chikamu:Iyo Basics yeCryptocurrencies
Kana iwe usina chokwadi chekutenga Bitcoin, unogona kusaziva kuti chii chinonzi Shanduko. A cryptocurrency Exchange, ibhizimusi rinobvumidza vatengi kutengesa macryptocurrencies kana emadhijitari emari…
Ramba uchiverengaGate.io Exchange Ongororo 2021, zvakachengeteka kutenga Bitcoin?
Kupera kwezviri mukati
Hapasisina mapeji ekuti utakure
Zvinyorwa zvekare →